Somalia: Imaaraatka Carabta & AU oo ka wada hadlay arimaha Soomaaliya
Home Somali News South and Central Somalia: Imaaraatka Carabta & AU oo ka wada hadlay arimaha Soomaaliya
Maxamed Axmed Othman Al Hammadi oo ah Danjiraha Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya iyo Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika AMISOM, Francisco Caetano Madeira ayaa ka wada hadlay xiriirka wadashaqeyneed ee u dhaxeeya UAE iyo Midowga Afrika, marka lagu daro habka lagu taageerayo ammaanka iyo xasilloonida Soomaaliya.
Intii lagu jiray kulanka, oo lagu qabtay safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho, ayaa Wakiilka Gaarka ah wuxuu ka mahadceliyay mahadnaqa iyo ixtiraamka Imaatinka Imaaraadka oo kaalin weyn ku leh taageerada amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyada oo loo marayo dib u dhiska ciidamada qalabka sida.
Wuxuu kaloo sheegay Francisco Caetano Madeira Imaaraadka in mashaariic horumarineed iyo mid bina-aadamnimoo uu ka fuliyay gobollo kala duwan, oo dalka ka tirsan.
Ambassador Al Hammadi ayaa ka mahadceliyey Wakiilka Gaarka ah ee ah in uu xoojiyo xiriirka iskaashiga u dhaxeeya Safaaradda Imaaraadka iyo Hawlgalka Soomaaliya, iyo sidoo kale iskaashiga Midowga Afrika iyo UAE guud ahaan taageeridda dadaallada ammaanka iyo xasilloonida Soomaaliya.
Ugu dambeyntii dhinacydan ayaa isku afka gartay in la kordhiyo dhaqaalaha ku baxa Howlgalka AMISOM, si loo soo afjaro dagaalka daba dheeraaday ee lagula jiro ururka Al-shabaab.
Xildhibaan Caasho Koos “Aqoonsiyadeena waan ka qarinaa ciidamada” Sabab
Xildhibaanada Golaha Shacabka Somaliya, qaarkood ayaa muujinaya walaac dhanka ammaanka ku...
DHAGEYSO: Aabaha Dhalay 9 jirtii Muqdisho lagu dilay (Calool Xumo)